Ihowuliseyili nothango lwaso lobhedu kunye idreyini mveliso - China Stainless intsimbi nothango lwaso nomsele abavelisi, ababoneleli
I-SC-1606 i-Stainless Grating kunye ne-Drain eyenziwe ngumenzi we-china
* Ngaba ngemfuneko ngokomsebenzi ngokweemfuno zabathengi.
* Ukucaciswa kwemveliso ngokubanzi kubhekisa koku kulandelayo.
* Ukungenisa umoya, ukukhanya, ukusasaza ubushushu, ukungatyibiliki, ubungqina bokuqhushumba.
* Easy ukufaka disassemble.
* Ipateni inokwenziwa ngumthengi.
SC-1604 Anti-umhlwa Stainless Steel nothango lwaso ngumsele eyenziwe China mveliso
* Le mveliso inomthamo omkhulu wokuthwala umthwalo kunye nepropathi echasene nefuthe.
* Isimbozo kunye nesakhelo zidityaniswe ngehenjisi. Kukuchasana nobusela, kukhuselekile, kwaye kulula nokuvula.
* Ukuba usebenzisa isinyithi, indawo enkulu yokuvuza kwamanzi ngonyango olushushu lokudibanisa amanzi, olunomtsalane nolomeleleyo.
* Inkangeleko entle, umphezulu oqaqambileyo
* Uhlobo lwentsimbi nothango lwaso lobhedu
W-uxinzelelo welding nothango lwaso lobhedu
L-uxinzelelo itshixiwe nothango
C-socket welding nothango lwaso lobhedu
SC-1605 Stainless umngxuma umngxuma Khupha Gratings
Le stainless steel perforated hole drain gratings yenziwe i-U-ezimiliselwe ijelo ine-liquidity engcono kune-V yemilo yemveli. I-ege rails precast kwisitishi ibonelela ngokulula xa ufaka i-gratings.it kulula ukuyifaka. Kwaye emva kokufaka, umhlaba ubonakalisa kuphela imingxunya emincinci yesikwere. Ububanzi bangaphakathi bunokuba yi-100mm, 150mm, 200mm, 250mm ukuya kuthi ga kwi-300mm.
Professional Metal Building Materials Stainless nothango lwaso lobhedu
Esi sisinyithi sentsimbi yenye yeentlobo zethu ezidumileyo, ezenziwe ngoyilo lwesebe leTriangle. Olu luyilo lunoncedo lokwenza umsantsa womhlaba oqhekeziweyo, kodwa amanzi aya kuhamba ngokuthelekisa ngokuthe gabalala kuhlobo oluqhelekileyo. Lo mgangatho ukhuselekile nokuba izihlangu eziphakamileyo ezinesithende ukuhamba ngazo.
I-ART.NOSC 一 1608 iMarterial L W H Ukugqiba i-SUS304 1000 150 25 yeenwele SUS316
Umgangatho ophezulu weZinto zoKwakha ezingama-304 okanye ezingama-316 ngeSinyithi sothango lokuntywila lwentsimbi
Stainless nothango lwaso, iyilelwe ukuba zibe yimigca emininzi yemingxunya ethe tyaba, entle kwaye imfutshane ngomsebenzi omnandi oMkhulu usetyenziswa ikakhulu ngaphakathi nangaphandle. Stainless nothango lwaso iyafumaneka kwi ezahlukeneyo kuyilo umhombiso kunye nenkqubo yokuhambisa, ukuhlangabezana ubuhle kunye nokusebenziseka bonke kwelinye.
I-SC-1607 eyilelwe umjelo wokuhambisa amanzi ngentsimbi engenanto
Stainless nothango lwaso lobhedu, ekwabizwa ngokuba welding Stainless Bar Bar nothango intle bewumsebenzi ngokugqibeleleyo kwaye ixesha elide kuzo zonke izicelo ethwele umthwalo kwaye ubukhulu becala isetyenziselwa ngaphakathi nangaphandle. Stainless nothango lwaso iyafumaneka kwiintlobo ezahlukeneyo zokuzala izithuba bar kunye nezinyuko ngokuxhomekeke kwizicelo kunye neemfuno umthwalo.
I-SC-1603 yokuhambisa amanzi ngeSinyithi ngesakhelo
Ukucocwa kweNtsimbi engenasici ngeSakhelo kwenziwa ngokuthwala ibha kunye nokuwela umnqamlezo ngokwendlela yokulungelelanisa i-flat-steel, kwindawo yoxinzelelo oluphezulu ku-Welder yokumelana nge-welding ngokusika, ukusika, ukuvula, ngaphezulu kwenkqubo yokutshixa njengokuqhubekeka kunye neemfuno zabathengi ezigqityiweyo iimveliso.
Elungiselelweyo Imilo Special Stainless Water nothango lwetanki lamanzi channel China Factory
Olu hlobo lwesinyithi lwentsimbi lwenziwe ngoyilo olunzima lomsebenzi ukuba ube ngumxholo wokukhusela umhlwa, uqinisekise ukuzinza nokuxhomekeka. Yenziwe ngumgangatho ophezulu we-304 okanye i-316 yentsimbi engenasici kunye nokusebenza kakuhle.
Umgangatho wokuThambisa uMgangatho weSinyithi
Umgubo wensimbi ongenawo umbane unokushenxiswa ngokukhawuleza, kulula ukufakwa, kunye nemilenze ehlengahlengiswayo kunye necala.it Kulula ukuyicoca, kunye nesiphon esisuswayo kunye nesigqubuthelo sokugubungela, ukufakwa okukhuselekileyo kunye nokusetyenziswa, ngamacala agudileyo.
I-SC-1611 ye-Balustrade Handrail Post Pipe End Cap eyongezwayo yokuhombisa i-Stainless Stainless Railing Hemisphere End Cap Cap Fittings
Igama leMveliso I-SC-1611 ye-Balustrade Handrail Post Pipe End Cap Izixhobo zokuhombisa i-Stainless Steel Railing Hemisphere End Cap Fittings Model No. Isicelo seSitifiketi se-ISO9001: Isicelo se-2015 / SGS Sisetyenziswa ngokubanzi ekunxibelelaneni nasekulungisweni kweentsimbi zokubamba ezikhuselekileyo kwinkqubo yethu yokukhusela. Isityalo sethu Iqela lethu Iziqinisekiso zethu Kutheni ukhetha thina? 1, Singabantu mveliso (manuf ...
Stainless ilifti Handrail, Plate yeSiseko seZandla, Enyangweni Handrail isibiyeli, Nkqo Handrail izibiyeli, Stainless Handrail, Zokubambelela,